China EAA inopisa yakanyunguduka inonamira firimu yealuminium vagadziri uye vanotengesa | H&H
EAA inopisa inyauka inonamira firimu yealuminium
Ukobvu / mm 0.04 / 0.05 / 0.08 / 0.1 / 0.12 / 0.15 / 0.2 / 0.25 / 0.3
Upamhi / m / 48cm / 50cm / 100cm sekugadzirisa
Kunyorera nzvimbo 75-90 p
Unyanzvi hwekushandisa muchina wekupisa-kupisa: 110-130, 6-30s 0.4Mpa
HA490 chigadzirwa chePolyolefin. Zvakare iyi modhi inogona kutsanangurwa seEAA. Iyo firimu inochinja ine bepa rakaburitswa. Kazhinji vanhu vanoshandisa hupamhi hwe48cm uye 50cm neukobvu 100 micron pafiriji.
HA490 yakakodzera kubatanidza machira akasiyana siyana uye simbi zvinhu, kunyanya aluminium. Iyi modhi iri kupisa-kutengeswa pamusika weBangladesh, Pakistan neIndia. Zvakare muChina, tinoshandira pamwe nevakawanda vanogadzira magetsi vagadziri kwenguva yakareba. Iyi modhi ine yakanyanya kusungunuka temprature iyo inozopa yakawanda yeakakwira temprature kuramba.
1. Simba rakanaka rekunamatira: Yekubatana kwesimbi, inozvibata chaizvo, iine simba rekunamatira.
2. Isina chepfu uye inochengetedza zvakatipoteredza: Haizoburitse kunhuwirira kusingafadzi uye haizove nepesvedzero yakaipa pahutano hwevashandi.
3. Zviri nyore kugadzirisa pamakina uye kuchengetedza-basa-kuchengetedza: Auto lamination muchina kugadzirisa, inochengetedza mutengo wevashandi.
4. Iva nekuita kukuru nealuminium zvinhu: iyi modhi inokodzera kushandiswa kwealuminium zvinhu zvinoumbwa.
5. Nepepa rekuburitsa: Iyo firimu ine pepa rekutanga, izvo zvinoita kuti iko kunyorera kuve nyore kuwana uye kugadzirisa.
HDA490 Hot inyauka inonamira firimu inonziwo EAA inopisa inyauka namira firimu iyo inoshandiswa zvakanyanya kune firiji evaporator lamination. Kazhinji lamination zvinhu aruminiyamu Panel uye aruminiyamu chubhu. Kunze kwezvo, Kutsiva chinyakare kunamatira, kunopisa kunyauka kunamatira firimu lamination rave iro hombe dhizaini iro vazhinji vemagetsi vagadziri vakagamuchirwa kwemakore mazhinji. Iyi modhi inopisa-kutengesa kumaodzanyemba kweAsia.
EAA inopisa inonyunguduka inonamira firimu inogona zvakare kushandiswa kune imwe machira lamination uye simbi kubatana.
Pashure: EVA inopisa inyauka inonamira padandemutande firimu
Zvadaro: PO inopisa inyauka inonamira firimu yefriji evaporator
Kaviri Akatenderedza Anonamira Firimu
Kupisa Melt Inonamira Firimu Roll
Pu Inonamira Firimu
Tpu Inonamira Firimu
Tpu Elastic Adhesive Firimu
Kupisa kunyauka chimiro chinodhindwa chinonamira pepa
PA inopisa inyauka inonamira firimu
Kupisa kunyauka tepi yekunamatira yeshangu
TPU Hot inyauka inonamira firimu yezvipfeko zvekunze
Yakapisa yakanyunguduka tsamba yekucheka pepa